विमानस्थलबाट उपकुलपति, अस्पतालबाट डाक्टर ‘उठाउने’ सरकार ::Nepali TV
You are here : Home News विमानस्थलबाट उपकुलपति, अस्पतालबाट डाक्टर ‘उठाउने’ सरकार
माओवादीले द्वन्द्वकालमा मान्छे अपहरण गरेकै शैलीमा सरकारले आफूसँग चित्त नबुझेका व्यक्तिहरूलाई ‘उठाएर’ डरधम्की दिन थालेको छ।
क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विमानस्थलबाटै 'उठाएर' बालुवाटार पुर्याएको एक साता नबित्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई अस्पतालबाटै 'उठाएर' मन्त्रालय लगेका छन्।
अस्पतालमा बिरामी जाँचिरहेका डा. भोजराज अधिकारीलाई मंगलबार दिउँसो २ बजेतिर ‘गृहमन्त्रीले भेट्न बोलाउनुभएको छ’ भन्दै फोन आयो। केही बेरमै मन्त्रालयका कर्मचारी गाडीसहित लिन आए। गृहमन्त्रीको नाम लिएर झिकाइए पनि उनलाई मन्त्रीले भेटेनन्। एक घन्टासम्म मन्त्रालयको कोठामा एक्लै राखियो।
करिब साढे ३ बजेतिर गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी कोठाभित्र छिरे।
उनले केही माओवादी कार्यकर्तालाई द्वन्द्वकालको घाइते भन्दै गलत ढंगले ‘अपांगता रिपोर्ट’ तयार पार्न दबाब दिएको डा. अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘उहाँले कोठामा आएर सिधै ‘तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएको छैन, जनयुद्धका महान योद्धाहरूको मन दुखाउने काम नगर्नुस्, राम्रो हुने छैन’ भन्दै मलाई धम्काउनुभयो,’ उनले भने।
सुवेदीले यही लवजमा डा. अधिकारीलाई कोठामा एक्लै राखेर तर्साएका थिए। अधिकारीले भने आचारसंहिताविपरित गलत रिपोर्ट बनाउन नसक्ने अडान राखे।
अस्पतालका सहकर्मी तथा परिवारमा कसैलाई जानकारी नदिई मन्त्रालय पुगेका डा. अधिकारी एक घन्टासम्म कोठामा एक्लै बस्दा त्रसित भएको बताउँछन्।
‘कसैलाई जानकारी दिएको छैन। गृहमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ भन्दै मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो। त्यहाँ पुर्याएपछि एउटा कोठामा बन्दीजस्तो राखियो। न कोही सोधखोज गर्न आउँछ, न कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने जानकारी दिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो एक घन्टा निकै डर लाग्यो।’
‘सुवेदीजीले एक घन्टा प्रहरी शैलीमा केरकार गर्नुभयो। गलत रिपोर्ट बनाइदिन दबाब दिनुभयो। मैले ‘जति धम्क्याए पनि गलत रिपोर्ट लेख्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिएँ,’ उनले भने।
घाइते भएका व्यक्तिलाई सरकारले ‘अपांगता रिपोर्ट’ दिन्छ। यस्तो रिपोर्ट पाँच–पाँच वर्षमा पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यही मूल्यांकनका आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले भत्ता दिनुका साथै सरकारी सेवामा आरक्षण लगायत विशेष सुविधा दिन्छ। धेरै अपांगता भएका व्यक्तिले धेरै भत्ता पाउँछ भने थोरै भएकाले थोरै।
रिपोर्ट पुनःमूल्यांकन गर्न घाइते व्यक्तिहरूले सरकारी अस्पतालमा जचाउनुपर्छ। डाक्टरले पुरानो रिपोर्टका आधारमा अपांगता स्थिति घटबढ के भएको छ हेरेर नयाँ बनाइदिन्छ।
यही क्रममा चार–पाँच जना माओवादी कार्यकर्ता मंगलबार बिहान ११ बजेतिर ट्रमा सेन्टर पुगेका थिए। आफूलाई द्वन्द्वकालका घाइते भनेर चिनाएका ती व्यक्ति अपांगता रिपोर्ट पुनःमूल्यांकन गराउन डा. अधिकारीको ओपिडी गए।
उनीहरूले यसपालि आफ्नो अपांगता प्रतिशत बढाइदिन दबाब दिए। अधिकारीले ‘हचुवामा अपांगता प्रतिशत बढाउन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि ती माओवादी कार्यकर्ता फर्किए।
त्यसको करिब एक घन्टापछि रिपोर्ट बनाउन आएका तिनै व्यक्तिसहित १०–१२ जनाको समूह हुलहज्जत गर्दै डा. अधिकारीको ओपिडीमा छिरे। ढोकामा भित्रबाट चुकुल लगाइदिए। र, आफूले भनेबमोजिम अपांगता प्रतिशत बढाएर नयाँ रिपोर्ट बनाउन दबाब दिए।
‘मैले जसलाई गलत रिपोर्ट बनाउन मिल्दैन भनेर एक घन्टाअघि फर्काइदिएको थिएँ, उनीहरू नै समूह लिएर तर्साउन आए,’ डा. अधिकारीले भने, ‘अस्पतालकै ओपिडी कक्षमा कोठा थुनेर ममाथि दबाब दिइयो। एक्कासि दस–बाह्र जना मान्छे ढोका थुनेर भित्र बसेपछि मेरो हालत के भयो होला?’
‘उनीहरूले जति डरधक्की दिए पनि ‘तपाईंहरूको दबाबमा रिपोर्ट फेर्ने काम म गर्दिनँ, पहिलेको जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिने हो’ भनेर अडान लिइरहेँ,’ उनले भने।
ती व्यक्ति भने ‘जसरी पनि हामीले भनेअनुसारकै रिपोर्ट बनाएर लैजाने’ भन्दै कुर्लिरहेका थिए।
जति भन्दा पनि नमानेपछि डा. अधिकारी आँट गरेर आफ्नो कुर्सीबाट उठे। ढोकाको चुकुल खोलेर बाहिर निस्के। उनलाई ती व्यक्तिहरूले रोकेनन्। उनीहरू कोठामै बसिरहे।
त्यहाँबाट सरासर खाजा खान गएका डा. अधिकारीलाई केही बेरमै ‘गृहमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ’ भन्दै फोन आयो।
हामीले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुवेदीसँग कुरा गर्यौं।
डा. अधिकारीलाई मन्त्रालय झिकाएर अस्पताल पुगेका व्यक्तिलाई नयाँ रिपोर्ट बनाइदिन भनेको सुवेदीले स्विकारेका छन्।
‘द्वन्दका घाइते कसैको हात छैन कसैको खुट्टा छैन, तर पहिला मूल्यांकन गर्दा अपांगता प्रतिशत थोरै भएकाले केही साथीहरू नयाँ रिपोर्ट बनाइदिन अनुरोध गर्दै जानुभएछ,’ सुवेदीले भने, ‘डाक्टरसाबले उल्टो हप्काउने, दप्काउने, हेप्ने गर्नुभयो भन्दै उनीहरू यहाँ आएका आयै गरे। त्यही विषयमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्न मैले नै उहाँलाई मन्त्रालय बोलाएको हुँ।’
‘मैले उहाँलाई तर्साउने, धम्काउने केही गरिनँ,’ उनले भने, ‘कोठाभित्र राखेर राम्ररी छलफल गरी चियासिया खुवाएर विदावारी गरेँ।’
‘मैले डाक्टरसाबलाई राम्रो मूल्यांकन गर्दिनुस्, राज्यबाट खाइपाइ आएको सुविधा सके बढाउने हो, नभए किन घटाउने भनेर भनेको हुँ। मैले त उनीहरूले भन्या कुरा मात्र बोल्या हुँ, म आफैंले केही भनेको छैन। ल कुरा यत्ति हो, कति केरकार गर्नुहुन्छ?’ सुवेदीले भने।
डा. अधिकारी भने वास्तविकभन्दा बढी अपांगता देखाएर बढी भत्ता लिन आफूलाई दबाब दिइएको बताउँछन्।
उनले गलत रिपोर्ट नबनाउने अडान मात्र लिएनन्, बरु अपांगतासम्बन्धी नीति फेर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको बताए।
‘हामीलाई यसरी दबाब दिनुभन्दा बरु सरकारले नै अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा बढाउने नीति ल्याए राम्रो हुन्छ। सुविधा बढाइदिने हो भने यसरी डाक्टरलाई डरधम्की देखाएर गलत रिपोर्ट बनाउनै पर्दैन,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालयबाट फर्केपछि डा. अधिकारीले ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्यायलाई आफूमाथि भएको घटना जानकारी गराउँदै निवेदन दिए।
ट्रमा सेन्टरले अर्को व्यवस्था नभएसम्म अपांगता मूल्यांकन नगर्ने सूचना जारी गरेको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पनि घटनाको लिखित जानकारी गराउने प्रमुख उपाध्यायले बताए।
‘आफ्नो काम गरिरहेका डाक्टरलाई गृहमन्त्रीको हवाला दिएर नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको छ। यो निकै आपत्तिजनक र डरलाग्दो कुरा हो,’ उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो जिउज्यानकै डर भयो भनेर अपांगता प्रमाणित गर्ने काम रोक्यौं।’